Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka oo weerarkii xalay ku tilmaamay mid waxashnimo ah | Baydhabo Online
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka oo weerarkii xalay ku tilmaamay mid waxashnimo ah
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii xalay ay ku dhinteen Xildhibaanno iyo shacab goobta ka agdhawaa, isagoo tilmaamay in shacabka iyo dowladda aanay marna ka daali doonin dagaalka lagula jirao argagixisada.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa hadalkan jeediyay isagoo tacsi u diraya shacabka, qoysaska iyo eheladii ay ka baxeen mas’uuliyiin iyo xubno kale oo shacabka qiimo ku lahaa oo fiidnimadii xalay ku shahiiday weerar argagixiso oo lagu qaadey mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho.
“Innaa Lillahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun. waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen Xildhiban Cabdullaahi Jaamac Kabaweyne iyo Xildhibaan Maxamuud Maxamed Guure. sidoo kale Cabdixamiid Sheekh C/qaadir oo uu uga tacsiyadeynayo Walaalkii Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo ka mid ahaa dadkii weerarka ku dhintay, Waxaan tacsi taa la mid ah u dirayaa qoysaskii ay ka baxeen dadkii shacabka ahaa ee iyaguna weerarkaasi waxashnimo ku shahiiday ee ay geysteen argagixisada Al-Shabaab’’, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya.
Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa ammaan u jeediyay ciidanka dowladda sida degdegga ah ee ay uga jawaabeen weerarka argagixisada ay xalay ka fuliyeen caasimadda, isagoo Alle uga baryey dadkii ku shahiiday weerarkan inuu Ilaahay naxariistii Jannatul Fardowsa ka waraabiyo, intii ku dhaawacanteyna uu caafimaad buuxa siiyo, qoysaska iyo eheladii dadkooda ay ku waxyeeloobeenna uu samir iyo iimaan ka siiyo.